जालझेल समूहमा मन्त्री विष्ट , को–को छन त्यो समूहमा ? – www.agnijwala.com
जालझेल समूहमा मन्त्री विष्ट , को–को छन त्यो समूहमा ?
उर्जा मन्त्री हुदा नाम कमाएका गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री हुदा बिबादमा आएका छन। आफ्नालाई मलेसिया पठाउने आधिकारिक संस्था (भेन्डर)को स्वीकृति दिने तयारी गरेका कारण कामदारले दुःख पाएका हुन् । यो खेलमा केही व्यवसायीको चलखेलले काम गरेको छ ।
उनले आफू निकटकालाई भेन्डर संस्था दिन लागेको खुलेको छ । त्यतिमात्र होइन, मन्त्री विष्टको आलोचना राजनीतिक दलका नेताले पनि थालेका छन् ।
को–को छ जालझेल समूहमा ?
श्रम समझदारीपछि पनि मलेसिया खुल्न ढिलाइ हुँदा बङ्गाली मूलका मलेसियन हनिफले नेपाल आएर मलेसियाको नयाँ संयन्त्र आफूले सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थासँग २०/२० लाख उठाउन थालेका छन् । तिनै हनिफसँग निकट रहेका केही व्यवसायीले मन्त्री विष्टसँगको निकटता देखाउँदै फेरि कामदार ठग्ने तयारी गरेका हुन् ।
मन्त्री विष्टको हनिफसँग विभिन्न होटलमा बैठक भएको थियो । त्यो बैठकमा पूजा चन्द ठकुरी र रघु पुरीको उपस्थिति र सहभागिता भएको थियो । धेरैजसो बैठक दरबारमार्गको अन्नपूर्ण होटलमा भएको थियो ।
पूजा नेपाल प्रहरीकी पूर्वआइजीपी रमेश चन्द ठकुरीकी बहिनी हुन् । रघु म्यानपावर व्यावसायी हुन् । पूजाले यसअघि हाइड्रोपावरमा मात्र लगानी गरेकी थिइन् । पुरीको आग्रहमा नै उनी भेन्डर संस्था हात पारी मलेसियाको रोजगारीमा आफ्नो पोल्टामा ल्याउन चहान्छिन् । पूजा र मन्त्री विष्टको चिनजान र नजिकपन ऊर्जामन्त्री हुँदाको बेलादेखि हो । पूजालाई मलेसियामा रेस्टुरेन्ट र क्लब सञ्चालन गर्ने ओझ श्रेष्ठले सहयोग गरेका छन् । श्रेष्ठसँग उपराष्ट्रपतिका छोरा दीपेश पुन नजिक हुँदा श्रेष्ठले पुनलाई पनि प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । हनिफ नेपाल आउँदा श्रेष्ठ पनि नेपाल आएका थिए । मलेसियामा व्यवसाय गर्ने सन्तोष कार्कीले हनिफको विभिन्नसँग सम्पर्क बढाएका थिए ।
भिसा लागिसकेका १० हजार कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् ।